Maxaa ka jira in Qaramada Midoobay hoos u dhigtay tirada shaqaalaheeda ka howlgala Muqdisho? – Bandhiga
Maxaa ka jira in Qaramada Midoobay hoos u dhigtay tirada shaqaalaheeda ka howlgala Muqdisho?
Qaramada Midoobay ayaa xadideysa shaqaalaheeda ka howgala xafiiskeeda magaalada Muqdisho kadib weerar hoobiyaal ah oo lagu qaaday xarunta UNSOM ee Muqdisho1dii bishan Janaayo 2019, Sida lagu odaay waraaq loo diray xubno u shaqeeya xafiiska UNSOM.
Warka ayaa intaasi ku daraya in shaqaale ka tirsan Qaramada Midoobay oo xarunta Muqdisho ka howlgalayay kuwaasoo iman lahaa Muqdisho 6da iyo 7da bishan lagu amray inaysan tegin Muqdisho oo ay iska xaadiriyaan xafiisyada UNka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
António Guterres Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay waxa uu horay u sheegay in ay ka xun yihiin in ergeygii uu u magacaabay dalka Soomaaliya ay dowlada Federalka ay ceyriso,balse waxa uu sheegay in uu magacaabi doono ergey cusub.
Hadaba arrinta ayaa dadka qaar waxey u arkaan iney kamid tahay jabaawaha maldaha ee Qaramada Midoobay ka bixineyso go’aankii DF ku ceyrisay Nicholos Haysom.